Usuku kwi-Puszta Equestrian Centre kufuphi Kalocsa, Hungary
I-Equestrian Show kwi-Puszta yaseHungary. Linda Garrison
Amahashe kunye nama-cowboy aseMegyar kwimiboniso yehashoni yaseHungary kwi-ranch kufuphi neKalocsa, eHongary yinto ephambili kwi-Danube River cruise eMpuma Yurophu. I-Puszta okanye iHongary Plain enkulu ihlanganiswe ngamashishini amakhulu, kwaye ama-cowboy angamaMagyar abonakalisa izakhono zabo ze-equestrian kule mboniso. I-UNESCO ivakalise inxalenye yePuszta, i-Hortobágy National Park, indawo eyiNtlaba yehlabathi kwi-1999.
Ama-cowboy aseMagyar athatha igama lawo kummandla wegama elifanayo, kwaye abantu baseHungary bavame ukubizwa ngokuthi iMagyar. Iimagyri zavela njengezizwe ezazihlala kwiBasim yaseBarim yintoni ngoku eyiChina. Baqala ukufudukela kwii-Ural Mountains zaseRashiya, ezaziye zabonwa njengomda wendalo phakathi kweYurophu neAsia. Izizwe eziseMagyar ezisemagqagqageni ekugqibeleni zagqitywa kwinto ekhoyo ngoku eHungary malunga ne-895 AD
Iinqanawa zomlambo e- Kalocsa , ebizwa ngokuba yi "capital capital" yelizwe, kwaye lihamba nje elifutshane ukuya kwiplaski yasePuszta. Nangona i-paprika yavela eMexico, namhlanje inxulumene neHungary. I-spice yenziwe kwi-pepper eyomileyo ephantsi komhlaba ngaphambi kokungezelela ukutya. Ukongeza kwi-flavour yayo eyahlukileyo, i-paprika nayo ifaka umbala wokutya. Ngaba unokucinga ngeqanda eliphambeneyo, isaladi yesitata, okanye i-goulash yesiHungary ngaphandle kwe-paprika efafazwe phezulu?
Ukuzonwabisa kwi-horse ye-Magyar i-cowboy show show iqala nge-horse parade, ilandelwa yizo zonke iintlobo zokuzivocavoca eziye zenziwa kwixesha lemfazwe, kodwa namhlanje zibonisa nje. Ngokomzekelo, abagibeli bafundisa amahashe abo ukuba bahlale okanye balala ukuze banike ijolise encinci ngexesha lokulwa okanye ukukhusela umgibeli. Inkwenkwe e-burro encinci inikezela ngokungafaniyo kwiinqwelo ezintle. Ingqungquthela yalo mboniso yinto ehambelana ne-Hungarian ukugijima kwehashe ezintlanu, eyaziwa ngokuba yi "Puszta-fiver". Le nkwenkwezi yayisebenzisa amahashe asithoba kunamahlanu!
Ukongeza kwi-show, iindwendwe zizonwabela ukutya kwesiprika kunye ne-apricot brandy, kwaye ukuhamba ngeenxa zonke kwinqanawa kwinqwelo ye-gypsy igqiba imini kwilizwe lelizwe laseHungary elibizwa ngokuthi iPuszta. Umrhwebi waseHungary unemfuyo kunye namahhashi amaninzi amancinci ayenomdla.
I-Texans yayiza kubiza iinkomo kule fahorns longhorns. Ngeke ufune ukubenza baphathe!
I-Equestrian Show kwi-Puszta yaseHungary
I-Magyar Cowboy kunye neHhashi Lakhe eHongary Horse Show I-Magyar cowboy ibhidliza ibhere. I-Puszta Equestrian Centre (c) iLinda Garrison
La ma-cowboys ayenokwenkqisa amahlwitha abo! Abagibeli beenqanawa zokuhamba ngeenqanawa eMlambo nabo banethuba lokuqhekeza isibetho kodwa bafumanisa ukuba kunzima kunokuba kubonakala.
I-Magyar Cowboy neHama e-Puszta Horse Show
I-Equestrian Show kwi-Puszta yaseHungary iMagyar Cowboy kunye neHama e-Puszta Horse Show. Linda Garrison
Kunzima ngokwaneleyo ukufundisa inja ukuba ihlale. Ukufundisa ihashe ukuhlala kufuneka kube nzima kakhulu. Olu buchule kunye nokulala phantsi kokubili kubalulekile kumahashe ngexesha lokulwa. Ukuba bahlala okanye balala, baya kuba yincinci encinci kwaye banokukhusela umgibeli wabo.
I-Magyar Cowboy kunye neHama Yakhe kwiHonary Horse Show
I-Magyar Cowboy kunye neHhashi Lakhe. Linda Garrison
Le nkwenkwezi yakwazi ukufumana ihashe layo ukuguqa aze alala phantsi.
Magyar Cowboys kunye namaHors abo
Ama-cowboy aseMagyar afundisa amahashe abo ukuba alala phantsi ukuze abakhuselele kwi-Equestrian Show e-Puszta yaseHungary. Linda Garrison
Ukulala phantsi komyalelo kubalulekile kumahashe ngexesha lokulwa. Namhlanje, nje ukubonisa; kodwa kusenomdla kakhulu.
Amahhashi enza iiMotouvers kwiziko laseHongary Equestrian Centre
Amahhashi adonsa i-buggy esebenza kwiziko lasePuszta Equestrian. Linda Garrison
Ezi zigugu ezindala zihamba ngokukhawuleza kunokuba zibukeka ngathi ziya.
Ukukhwelisa ngeHama e-Equestrian Centre kufuphi neKalocsa, eHungary
Ukuhamba kweenqwelo zamahhashi ePuszta eHungary. Linda Garrison
Ukuba ukhangele ngaphaya kweloliwe, uyabona ukuba kungani le nxalenye yaseHungary ibhekwa njengendlala.
I-Wagon Wagon ne-Three Horses e-Puszta Equestrian Centre
I-Equestrian Show kwi-Puszta yaseHungary Iinqwelo zelizwe kwi-horse show show. Linda Garrison
Le nqwelo inokulayishwa ngeepounds ezininzi zeempahla ukusuka ekubeni amahashe amathathu ayidonsa.
I-Magyar Cowboy kwiiHorses zeTeines Nine
I-Magyar Cowboy kwiiHorses zeTeines Nine. Linda Garrison
Ukuma nje kwihhashi elingenalutho lithatha italente; ubuchule kunye noqeqesho olubandakanyekayo ukuhlala kunye neyesithoba kubo luyamangalisa kakhulu!
Umfana kunye noBroro kwi-Horse Show Show
Umfana kunye noBroro kwi-Horse Show Show. Linda Garrison
Le nkwenkwe encinci kunye ne-burro yayo ibonelela ngokucacileyo kwiinkwenkwezi zaseMagyar ezintle kunye namahhashi abo amakhulu.
Gypsy Wagon ePuszta Ranch
Gypsy Wagon ePuszta Ranch. Linda Garrison
Ekuphelelweni kwebhasti, zonke iindwendwe zeenqanawa zokuhamba ngeenqanawa zivuya ngokuhamba ngeenxa zonke kwinqanawa kule nqola yemveli yegypsy. Yindlela enhle yokubona i-ranch eninzi kwi-puszta.
Uphi u Budapest?
Inkcubeko yaseHungary 101 kwiifoto
Ukutya kweNdabuko eHungary
I-Krismesi Enhle Kakhulu evela eHungary
Isikhokelo Senu Sinezinyathelo Ezi-4 zokubala i-Gas Mileage yohambo lweNdlela
Imyuziyam yase-Anahuacalli ye-Art Pre-Hispanic
I-Apache Wedding Wedding Prayer
Ngowe-2016 I-Wolf Trap's Children's Theater-in-the-Woods
I-Outdoor Ice Skating Rinks eLos Angeles
IWashington Renaissance Fair
Usuku olungabonakaliyo lukaStelline Day Day Iingcinga eToronto
I-J. Paul Getty Museum kwi-Getty Villa
Iimbono zeNgcaciso zeMfutshane
Indlela Yokugcina Imali kwiihotele zeeholide kwiholide lakho elilandelayo
Amabala aphezulu okutya ngaphandle ngaphandle kwiBoston's North End
Ukuhlaziywa kweGear: I-Osprey FlapJack I-Backpack yokuhamba
UkuCatshulwa kweMiboniso yoBonwakude kunye neS Suites